Isetshenziswa Kanjani I-TikTok Ekumaketheni kwe-B2B | Martech Zone
I-TikTok iyinkundla yezokuxhumana ekhula ngokushesha kakhulu emhlabeni, futhi inamandla okufinyelela ngaphezu kwe-50% yabantu abadala base-US. Kunezinkampani eziningi ze-B2C ezenza umsebenzi omuhle wokusebenzisa i-TikTok ukwakha umphakathi wazo futhi ziqhubekisele phambili ukuthengisa, ukuthatha. Ikhasi likaDuolingo leTikTok isibonelo, kodwa kungani singaboni ibhizinisi-kuya-ibhizinisi elengeziwe (B2B) ukumaketha ku-TikTok?
Njengomkhiqizo we-B2B, kungaba lula ukuzithethelela ngokungasebenzisi i-TikTok njengesiteshi sokumaketha. Phela, iningi labantu lisacabanga ukuthi i-TikTok iwuhlelo lokusebenza olugcinelwe intsha edansayo, kodwa isikhule kakhulu ngale kwalokho. Eminyakeni embalwa edlule, izinkulungwane zemiphakathi ye-niche iyathanda cleantok futhi incwadi zakhiwe ku-TikTok.
Ukumaketha kwe-B2B ku-TikTok kumayelana nokuthola umphakathi ohambisana nomkhiqizo wakho kakhulu nokudala okuqukethwe okubalulekile kulowo mphakathi. Lokhu yikho kanye esikwenzayo empilweni yethu Ikhasi le-TikTok ku-Collabstr, futhi ngenxa yalokho, sikwazile ukukhiqiza izinkulungwane zamadola ebhizinisini elisha njengenkampani ye-B2B.
Manje yiziphi ezinye izindlela zokumaketha kwe-B2B ku-TikTok?
Dala Okuqukethwe Okuphilayo
I-TikTok yaziwa ngayo eziphilayo finyelela. Inkundla inikeza ukuchayeka okuphilayo kakhulu kunezinkundla zendabuko ezifana ne-Facebook noma i-Instagram. Lokhu kusho ukuthi ungathola inani elihle lama-eyeballs kumkhiqizo wakho we-B2B ngokuthumela okuqukethwe kwe-organic ekhasini lakho le-TikTok.
Ngakho-ke yiziphi izinhlobo zokuqukethwe kwemvelo ongazithumela kumkhiqizo wakho we-B2B?
Case Studies - Izibonelo zezifundo ziyindlela enhle yokuheha amakhasimende angaba khona ngaphandle kokukhangisa kuwo ngokuqondile. Ungakha isibonelo socwaningo ngokuthola izindaba zempumelelo embonini yakho futhi ubonise izinto abazenze kahle kubabukeli bakho. Isibonelo, uma uyinkampani yokumaketha yedijithali eyenza amakhasimende akho izikhangiso zevidiyo, yenza ucwaningo ngezikhangiso ezihamba phambili zevidiyo ze-B2B nokuthi kungani zisebenza kahle kangaka. Ungathatha izikhangiso ezinkampanini ezifana ne-Red Bull futhi utshele abantu ukuthi kungani zisebenza kahle kangaka. Ngokwemvelo, uzoheha abantu abangabamakethi noma abanikazi bamabhizinisi abafuna umuntu ozobenzela izikhangiso. Izibonelo zezifundo zikuvumela ukuthi uzibeke njengochwepheshe, lokhu kuhle ngoba uma izethameli zakho sezilungele ukuthenga, zizoza kuwe kuqala.
How-To Imiqophi - Amavidiyo wesitayela ayindlela enhle yokuheha izethameli zakho ezihlosiwe ku-TikTok. Ngokunikeza inani ngemfundo, uzokwakha abalandeli abathembekile abangaba amakhasimende. Ukuze udale amavidiyo asebenzayo wesitayela somkhiqizo wakho we-B2B, kufanele uqale uqonde ikhasimende lakho okuhlosiwe. Uma ikhasimende lakho okuqondiswe kulo kungabanye abanikazi bamabhizinisi, okuqukethwe kwakho kufanele kukhange kubona ngqo. Isibonelo, uma ngisebenzisa i-ejensi yokuklama izithombe ye-B2B, ngingafuna ukudala ividiyo ebonisa abanye abantu ukuthi bangadala kanjani ilogo yamahhala yomkhiqizo wabo. Ngokunikeza inani, uheha izethameli ezikwethembayo.
Ngemuva kwezinto - Imvelo eluhlaza yokuqukethwe kwevidiyo emfushane inika amabhizinisi ithuba lokubeka izinto obala. Ngokungafani nakwamanye amapulatifomu afana ne-Instagram, kulungile ukuthumela okuqukethwe okungapholishiwe nokuluhlaza ngemuva kwezigcawu ku-TikTok. Ukuthumela ama-vlog, imihlangano, nezingxoxo ezibonisa ukusebenza kwansuku zonke enkampanini yakho ye-B2B kuzokwakha ukwethembana phakathi kwebhizinisi lakho nekhasimende lakho olihlosile. Ekugcineni, abantu baxhumana nabantu kangcono kunokuxhumana nezinkampani.
Thola ama-TikTok Influencers
Uma ungaqiniseki ngokuthi ungaqala kanjani ngokudala okuqukethwe kwenkampani yakho ye-B2B ku-TikTok, cabanga ukuthola abathonya ku-niche yakho ukuze usuke phansi.
Happy New Year mndeni ? Nansi indlela ongasebenzisa ngayo i-Collabstr ukuze uqalise imikhankaso yabathonya! #sebenzisana
♬ umsindo wangempela - Collabstr
Abagqugquzeli beTikTok bangasiza ibhizinisi lakho le-B2B ngezindlela ezahlukahlukene. Ake singene ezindleleni ezimbalwa ongasebenzisa ngazo amandla okuthonya ukumaketha kwakho kwe-B2B ku-TikTok.
Okuqukethwe okuxhasiwe - Enye indlela enhle yokukhulisa abathonya be-TikTok ngokumaketha kwakho kwe-B2B ukuthola nokuqasha abagqugquzeli ku-niche yakho ukuze bakudalele okuqukethwe okuxhasiwe. Ake sithi ungumhlinzeki wokusingatha ifu futhi uzama ukuthola ukuchayeka okwengeziwe kubanikazi bamabhizinisi nge-TikTok. Enye indlela enhle yokwenza lokhu kungaba thola umgqugquzeli endaweni yobuchwepheshe, enezithameli zabanye ochwepheshe abavame ukudinga ukusingathwa kwamafu ngemikhiqizo yabo. Thatha lo mdali we-TikTok, ngokwesibonelo, ungumthuthukisi wesoftware, futhi izethameli zakhe cishe zizoba nentshisekelo yokuzwa ngezixazululo zokubamba amafu.
TikTok Izikhangiso - Enye indlela enhle yokusebenzisa abagqugquzeli be-TikTok ngokubenza bakhe okuqukethwe kwezikhangiso zakho. Uma usuthole umgqugquzeli owuqonda ngobuqotho umkhiqizo wakho, ungamkhokhela ukuze udale izikhangiso zevidiyo ezisezingeni eliphezulu zomkhiqizo noma isevisi yakho ye-B2B. Kumgqugquzeli odala izikhangiso, uzokwazi umhlophe okuqukethwe kwabo ngokuqondile nge-TikTok, noma ungavele uthole amafayela angempela kubo futhi uwasebenzise njengezikhangiso nakwamanye amapulatifomu. Ukusebenzisa ama-influencers ukuze udale eyakho TikTok izikhangiso ingangeza isendlalelo sobufakazi bomphakathi nobuqiniso obungekho nokuqukethwe okungokwesiko komkhiqizo.
Uzenza kanjani izikhangiso ze-TikTok ezingamunyi? #sebenzisana
♬ Usuku Lwelanga - uTed Fresco
Qasha Abadali Bokuqukethwe bakwaTikTok - Enye indlela yokukhulisa abagqugquzeli be-TikTok bomkhiqizo wakho we-B2B ngokumane ubaqashe ukuthi bakudalele okuqukethwe. Abagqugquzeli be-TikTok bajwayele kakhulu inkundla, i-algorithm yayo, kanye nezilaleli ezidla okuqukethwe ku-TikTok. Besebenzisa lolu lwazi, bangakha okuqukethwe okukhangayo nokujabulisayo okuthola ababukeli abaningi. Lokhu kungase kube into iqembu lakho elingakwazi ukuyenza, okuyinto enhle, Uma kunjalo, thola umgqugquzeli oqonda umkhiqizo noma isevisi yakho ye-B2B, futhi umkhokhele nyanga zonke ukuze udale okuqukethwe kwekhasi lakho.
Uma ubheka i-TikTok njengesiteshi sokumaketha se-B2B, kubalulekile ukuvula ingqondo yakho ezindleleni ezahlukene ongazithatha njengenkampani ye-B2B ku-TikTok.
Okokuqala, kufanele ukhombe izethameli zakho ozihlosile. Ubani ongase athole umkhiqizo wakho uwusizo? Uma usuzikhombile lezi zethameli, udinga ukuthola ukuthi ubani osevele ethwebula lezi zethameli ku-TikTok.
Kusuka lapha, ungaqasha umuntu osevele enza umsebenzi omuhle wokuthwebula izethameli, noma ungasebenzisa okuqukethwe kwazo njengogqozi bese uqala ukwenza okwakho okuqukethwe okwakhelwe izethameli ezifanayo.
Thola ama-TikTok Influencers Landela i-Collabstr ku-TikTok
Ukudalula: Martech Zone isebenzisa isixhumanisi sayo I-Collabstr kulesi sihloko.
Tags: b2bukumaketha kwe-b2bb2b isu lokumakethangemuva kwezintoincwadiibhizinisi-to-ibhizinisiucwaningo lwesigamekocleantokukuhlanganyeladuolingokanjani amavidiyoumthelelaukumaketha kwamathonyaokuqukethwe kwe-organicividiyo emfushaneTikTokizikhangiso ze-tiktokabadali bokuqukethwe kwe-tiktokama-tiktok influencersokuqukethwe kwevidiyoisu lokuqukethwe kwevidiyoizikhindi zevidiyo
Ideski Lami Lehhovisi Lasekhaya Nobuchwepheshe Bokuqoshwa Kwevidiyo, Inkomfa, kanye Ne-Podcasting